I-Mass Production Cofttek
Kule minyaka eyishumi edlule, i-Cofttek ibilokhu inikezela ngezinsizakalo ezenziwe ngokujwayelekile nezokukhiqiza. Izinga lethu lesevisi lingalala kusuka ku-milligram's batch encane kuya kwamathani ezinsizakalo ezinkulu zokukhiqiza.
Iningi lamakhasimende ethu liseNyakatho Melika, eYurophu, eAisa, kuhlanganise nePfizer, lilly, roche, GSK, MSD, bayer kanye nezinye izinkampani ezidumile.
Yonke inqubo yethu yokwenziwa komsebenzi kanye nezinsizakalo zokukhiqiza zenziwa ngaphansi kwezimo zobumfihlo obuqinile. Amathimba ethu ahlanganisiwe wephrojekthi asekelwa iqembu elihlangene elinolwazi futhi elizinikezele lamasosha omzimba. Ukusebenza ngamakhamera anezinga lokushisa kusuka ku -100˚C kuze kufike ku-300˚C, nezikali ezivela ku-5L kuya ku-5000L, inani linikezwa kumakhasimende ngokuhlanganiswa okusebenzayo ngaphakathi kwamakhaya wezikhulu eziphambili zeprojekthi (kuze kube yizibalo zamathani we-metric) futhi zisebenza izithako zemithi. Ukukhiqizwa kwenziwa endaweni yethu yokukhiqiza ephelele.
Senza ngokwezifiso ukuthengiswa kwamakhemikhali okukhiqiza ukuhlangabezana nokunikezwa kweprojekthi yakho ethize ngejubane elihle kanye nezindleko ngenkathi uhlangabezana nezindinganiso eziphakeme kakhulu zokuphepha kwenqubo nokuhambisana nokulawula. Izinqubo zokukhiqiza ezilungiselelwe zivumela ukukhululeka kwe-batch size kanye nekhwalithi yomkhiqizo othuthukisiwe. Zonke izinqubo zenzelwe ukuhlangabezana nezindinganiso eziqinile zokulawula.